Sida Loo Hagaajiyo Xawaaraha Mareegta Xubinimadaada Behmaster Qalabka APM (Tusaaleyaal Dhab ah) | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Hagaajiyo Xawaaraha Mareegta Xubinimadaada Behmaster Qalabka APM (Tusaaleyaal Dhab ah)
Sida Loo Hagaajiyo Xawaaraha Mareegta Xubinimadaada Behmaster Qalabka APM (Tusaaleyaal Dhab ah)
La socodka xawaaraha iyo waxqabadka mareegta xubinimada ayaa ka dhib badan kan goobta WordPress ee fudud. Haddii aadan si sax ah ugu habeynin goobtaada xubinnimada si ay u miisaameyso, waxaad isla markiiba ogaan doontaa inaad ku mashquulsan tahay culeysyo bogag ah, 500 oo khalad ah, iyo waqtiyo dhimis joogto ah. Kuwani waa maya-maya adag si ay xubnahaaga uga farxiyaan iyo heerka qulqulka goobtaada mid hooseeya.
Waxaad u raaci kartaa waxyaabaha la sameeyo iyo kuwa aan samayn ee loogu talagalay socodsiinta goobaha xubinnimada si hufan, iyadoo la hubinayo inaad hagaajisay goobtaada inay ku shaqeyso waxqabadka ugu wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah kakanaanshahooda korodhay, marka aad la kulanto arrin kasta oo ku saabsan waxqabadka goobta xubinimada, way adagtahay in si dhakhso ah loo hagaajiyo. Taasi waa halka ujeedada loo dhisay aaladda APM sida Behmaster APM waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh.
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa wax ku saabsan qaybaha kala duwan ee goobta xubinimada WordPress, sababta aad ugu baahan tahay aaladda APM si aad ula socoto xawaaraha boggaaga xubinimada iyo waxqabadka, iyo sida aad u isticmaali karto Behmaster APM in la sameeyo oo kaliya.
Ma ku faraxsan tahay inaad bilowdo? Aan quusno!
Qaybaha kala duwan ee Goobta Xubinimada
Siyaabo badan, kakanaanta goobta xubinimadu waa sida dukaanka WooCommerce. Labaduba waxay u adeegaan waxyaabo badan oo aan la dabooli karin isticmaalayaasha, taas oo ay ugu wacan tahay sifooyinkooda shakhsiyaynta sida xisaabaadka isticmaalaha, isku dhafka qolo saddexaad, jeegagaynta, iyo in ka badan.
Xidhmada goobta Xubinnimada WordPress ee caadiga ah
Goobta xubinnimada waxay ku imaan kartaa dhadhan badan. Waxay noqon kartaa goob blog oo fudud oo ay ku jiraan qaar ka mid ah waxyaabaha ku xaddidan oo keliya xubnaheeda, ama waxay noqon kartaa goob koorso ku salaysan oo aad u adag oo lagu dhisay Nidaamka Maareynta Waxbarashada (LMS). Waxa kale oo ay noqon kartaa madal ay xubnuhu kaga doodi karaan mowduucyo kala duwan.
Dhib ma leh kiiska isticmaalka saxda ah, dunta caadiga ah ee tolitaanka goobaha xubinnimada ee kala duwan waa bulsho ay ku wada xidhi karaan kana tirsan yihiin.
Qaybaha caadiga ah ee goobaha xubinnimada
Caadi ahaan, goobta xubinimada WordPress ayaa xaddiday nuxurka, hubinta marinnada lacag bixinta (ay ku jiraan is-diiwaangelinta ama lacag-bixinnada soo noqnoqda), iimaylo toos ah, kuuboonno, muuqaallo gaar ah, iyo macluumaadka la soo dejisan karo.
Silsiladdu waxay u xoog badan tahay sida isku xirka ugu liita, sidaas oo kale waa waxqabadka goobta xubinnimada. Xidhiidho badan oo la isku xidhi karo, dhibaato wax qabad ayaa ka soo bixi karta meel kasta iyo wakhti kasta. Ka jawaabista arrimahan oo kale si degdeg ah oo hufan waa lama huraan si xubnahaagu u sii joogaan oo ay u koraan bulshadaada.
Behmaster APM waxay kaa caawinaysaa inaad si sax ah taas u samayso, kaa caawinaysa inaad si toos ah u hagaajiso arimaha waxqabadka ee goobaha WordPress. Waxaa loo dhisay in si wanaagsan loola socdo waxqabadka bogagga WordPress, oo ay ku jiraan boggaga xubinnimada ee lagu martigeliyo behmaster.
Faa'iidooyinka Adeegsiga Behmaster Qalabka APM ee Goobaha Xubinimada
Qiyaasta waxqabadka goobtaada xubinimada waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa khadkaaga hoose. Waad isticmaali kartaa Behmaster APM si ay u garaacdo dhibaatooyinkan. Qaar ka mid ah Behmaster Faa'iidooyinka badan ee APM ee goobaha xubinnimada waxaa ka mid ah:
Waxay xoojisaa saxiixyada xubinnimada
Aragtida koowaad aad bay muhiim u tahay! Waxqabadka mareegaha ayaa saameyn weyn ku leh heerarka beddelka. Cilmi baaris ayaa si joogta ah u muujisay in shabakadaha degdega ah ay keenaan iibsiyo badan ama saxiixyo. Behmaster APM waxay kaa caawin kartaa inaad ku sii jirto heerka ugu sarreeya ee shabakadaada xubinnimada xawaaraha iyo waxqabadka, hubinta in xubnaha kartida leh iyo kuwa jiraba aysan ka tagin goobtaada.
Waxay hoos u dhigtaa heerka dhimista
Soo jiidashada xubnaha cusub aad ayay uga adag tahay in mid lagu hayo kuwa jira. Churn waa xaqiiqada nolosha ee goob kasta oo xubinnimada. Iyadoo heerarka hoos u dhacu ay si weyn u kala duwan yihiin iyadoo ku xiran hadba warshadaha goobtaada xubinimada ay ku jirto, hoos u dhigida waxay muhiim u tahay guusha ganacsigaaga mustaqbalka fog.
Heerarka curan ee warshadaha (Isha: Cilmi-baarista soo noqnoqda)
Xitaa leexashada ugu yar ee waxqabadka goobtaada waxay si weyn u saameyn kartaa heerka qulqulkaaga iyo xariiqda hoose. Waad isticmaali kartaa Behmaster APM si ay uga guulaysato arrimahan ka hor inta aysan xitaa dhicin.
Waxay kordhisaa ka qaybgalka xubnaha
Tani waxay si fiican ugu xidhan tahay faa'iidada hore. Horumarka wax qabadku kaliya ma saameeyo heerarka hoos u dhaca laakiin sidoo kale ka qaybgalka xubnaha. Daraasad Google ah ayaa lagu ogaaday in isticmaalayaashu ay ku soo noqdaan goobta oo ay aad ula macaamilaan haddii ay si fiican u shaqeyso. Isticmaalayaashu waxay sidoo kale xusuustaan ​​sidii ay dareemeen booqashadooda hore, waxayna si dareen leh u go'aansadeen inay ku noqdaan goobta mar dambe iyagoo ku saleysan khibraddaas. Goobta xubinnimada, taasi aad ayay muhiim u tahay.
Waxay Kordhisaa Sumcaddaga Summada
Khibrada isticmaale ayaa door weyn ka ciyaarta sida xubnuhu u arkaan astaantaada. Sida cilmi-baadhistu sheegtay. 88% Isticmaalayaasha khadka tooska ah ayey u badan tahay inay daacad u sii ahaanayaan astaanta ka dib khibrad aan fiicnayn. Daraasad la mid ah ayaa sidoo kale lagu ogaaday 75% Isticmaalayaasha waxay u badan tahay inay ku boodaan markabka goobta tartame haddii ay ka cabanayaan arrimaha waxqabadka goobta.
Waqti dheeri ah oo suuqgeyn ah
Adigoon ka taxadarin arrimaha waxqabadka, ama si dhakhso ah u hagaajin marka ay soo baxaan, waxay kuu fasaxaysaa waqti badan adiga iyo kooxdaada (haddii ay jiraan). Waxaad isticmaali kartaa wakhtigan dheeriga ah si aad u sameyso waxyaabo badan oo muhiim ah, sida abuurista nuxurka, la macaamilka xubnahaaga, iyo kobcinta goobtaada xubinimada.
Waxay yaraynaysaa Martigelinta iyo Kharashyada Kaabayaasha
Hagaajinta goobtaada waxay kaa caawineysaa inaad ku ilaaliso martigelintaada iyo kharashyada kaabayaasha sida ugu hooseeya ee suurtogalka ah. Behmaster APM waxay kaa caawinaysaa inaad garato caqabadaha wax qabad ee goobtaada adoo tilmaamaya koodka saxda ah, plugin, fidinta, ama adeega cid saddexaad ee masuulka ka ah. Waxaad u isticmaali kartaa macluumaadkan si aad u dhinto kharashyada hoos u dhigaya waxqabadka boggaaga.
Sida loo Isticmaalo Behmaster APM si ay u xalliyaan Xawaaraha Mareegta Xubinnimadaada
Hadda waxaan ka wada hadalnay sida Behmaster APM waxay kaa caawin kartaa inaad hagaajiso xawaaraha boggaaga xubinimada WordPress iyo arrimaha waxqabadka, waa waqtigii aad fiirin lahayd qaar ka mid ah tusaalooyinka adduunka dhabta ah.
Ka bilow Aasaaska Behmaster APM
Behmaster APM waxay la timaadaa astaamo badan oo la socodka waxqabadka. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad barato ereybixintiisa kala duwan oo aad barato sida loo akhriyo fikradihiisa. Waxaad tixraaci kartaa our Behmaster Maqaalka aqoonta APM si loo bilaabo. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Behmaster APM, waxaan kugula talinayaa inaad akhrido Behmaster Qaybta APM FAQ.
Dejinta Goobta Xubinnimada WordPress
Behmaster APM waxay la shaqeysaa kaliya boggaga WordPress ee lagu hayo Behmaster. Waxaan dejiyay goob waxbarasho e-waxbarasho si aan ugu ekaysiiyo arrimaha waxqabadka ugu badan ee ay la kulmaan goobaha xubinnimada.
Imtixaanka Behmaster Bogga hore ee goobta xubinimada LMS
Sida kuwa Behmaster APM ee maqaalka WooCommerce, waxaan isticmaalay magac domain oo dhab ah si aan u hubiyo in SSL/TSL gacan qaadku dhaco. Hoos waxaa ah faahfaahinta goobta bandhigga:
Xidhmada Server: Nginx 1.19.4, PHP 7.3.24-3, MariaDB 5.5.5
Nooca WordPress: WordPress 5.5.3
Mowduuca: Mawduuca Astra 2.6.1
Plugins aasaasiga ah: Gutenberg, Akismet Anti-spam, iyo Behmaster Plugin waa in la isticmaalo.
Plugin LMS: LearnDash LMS
Tusaale kasta, waxaan habeeyey goobta xoogaa si aan u muujiyo arrinta waxqabadka la cayimay. Waa markii la xalin lahaa dhibaatada!
1. Meesha Xubinimada APM Tusaale: Waxqabadka Frontend aayar ee Xubnaha
Waxqabadka Frontend wuxuu muhiim u yahay degel kasta. Guud ahaan, goobaha xubinimadu waxay u adeegaan waxyaabo badan oo firfircoon, taas oo ay ugu wacan tahay sifooyinkooda gaarka ah si ay u qanciyaan xubin kasta. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ku dhejin kartaa cadaadis badan serverka, taasoo keentay in degel si tartiib ah u gaabis ah.
PHLEARN.com waxay awood u leedahay barnaamijkooda waxbarasho Behmaster
Tusaalahan, goobta xubinimadu waxay qaadatay wakhti aad u badan si ay uga jawaabto mar kasta oo isticmaaluhu booqdo bogga macluumaadka xaddidan. Mararka qaarkood, waxay qaadatay in ka badan 3 sekan in laga jawaabo. Taasi waa khibrad isticmaale oo xun.
Aan awoodno Behmaster APM si loo ogaado arrinta waxqabadka.
fullintu Behmaster APM ee MyBehmaster dashboard
Si aad u bilowdid, tag bogga Monitoring bogga MyBehmaster dashboard, ka dibna Awoodi la socodka waxqabadka. Waxay qaadan doontaa dhowr ilbiriqsi Behmaster APM si loo duubo cabbirka waxqabadka goobtaada.
Waxaan kugula talineynaa inaad sugto ugu yaraan 5 daqiiqo ka hor intaadan qodin xogta la ururiyay Behmaster APM Taasi waxay hubinaysaa inay jiraan qiyaaso hawlqabad oo ku filan oo ay ururiyeen Behmaster APM
Waxa kale oo aad dejin kartaa muddada Behmaster APM waxay isticmaashaa si ay u jajabiso cabbirada waxqabadka. Halkan, waxaan doortay inaan eego cabbirka waxqabadka ugu dambeeya 60 daqiiqo.
Behmaster APM dashboardka aasaasiga ah
Laga soo bilaabo garaafka kore, waxaad arki kartaa in hababka PHP ay qaataan inta badan wakhtiga wax kala iibsiga. Bal aynu eegno /hal wax kala iibsiga ee ku hoos qoran Wax kala iibsiga ugu yar shaxda hoose.
Shaxda "wax kala iibsiga ugu yar" Behmaster APM
The /hal Tilmaamaha macaamil ganacsi ee ku wajahan feylka template boostada, kaas oo goobtan noqon kara bogga koorsada shakhsi ahaaneed.
Tusaalooyinka wax kala iibsiga ee mid ka mid ah wax kala iibsiga ugu hooseeya
Behmaster APM ayaa ku tusi doonta liiska la doortay Tusaalooyinka wax kala iibsiga markaad gujiso mid kasta oo ka mid ah macaamilada aan dhicin. The Muunad ugu gaabis ah (11,627.77 ms) waa kiiskii ugu xumaa ee la diiwaan galiyay, halka 95aad boqolkiiba (10,816.37 ms) iyo 50aad boqolkiiba (6,084.27 ms) muunado ayaa ka dhigan cabbirka waxqabadka guud si ka wanaagsan.
Halkan, ka Muunad ugu gaabis ah waa ku filan si ay u 95aad boqolkiiba muunad. Bal aan eegno.
Faahfaahinta macaamilka ee muunadda boqolleyda 95aad
U fiirso URL-ka abuura macaamilkan. Waxay tilmaamaysaa /koorsooyin/wordpress-tutorial aasaasiga ah bogga. Hoos u dhaadhac gudaha Jadwalka raadraaca wax kala iibsiga si loo arko taako qaadanaysa muddada ugu badan.
Behmaster APM waxay muujisaa taako leh arrimo waxqabad oo muhiim ah
Waxaad arki kartaa in laba taako ay qaataan boqolkiiba wax la taaban karo muddada wax kala iibsiga. Inta badan, Behmaster APM waxay si caqli-gal ah u aqoonsan kartaa taabashooyinkan inay yihiin kuwo muhiim ah oo waxay ku iftiimin kartaa midab guduudan oo casaan ah ama oranji ah, iyadoo ku xiran darnaanta. Halkan, taako guduudan ayaa tilmaamaya arrin hawl qabad heersare ah.
Codsi HTTP dibadeed ah ayaa bilaabmaya courses.salrav-external.com GET taako Aan gujino si aan u helno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan.
"Faahfaahinta taako" iyo "Raad raadka" ee taako
The Faahfaahinta taako qaybta ayaa ku tusi doonta tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan mudadan, sida nooca, Nooca hoose, oo buuxa HTTP URL. Kaliya hoostiisa, gudaha Raadinta xirmooyinka qaybta, waxaad arki kartaa in qoraalka PHP loo yaqaan course-views-counter.php ayaa bilaabaya baaxadan.
Markaad isku dayeyso inaad qabato sababta saxda ah ee arin hawleedka, dhammaan qaybaha ayaa muhiim ah! Aan hoos u dhigno natiijooyinkayaga oo aan u gudubno si aan u aragno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan koorsada_views_counter isbeddel.
"Faahfaahinta taako" iyo "Raad raadka" ee taako kale
In ka Faahfaahinta taako qaybta, waxaad arki kartaa in plugin loo yaqaan koorsada-views-counter wuxuu abuuraa baaxaddan. Behmaster APM aad bay faa'iido ugu leedahay halkan. Waxay jajabisaa dhammaan xogta hoosteeda Raadinta xirmooyinka waxayna ku tusinaysaa plugin-ka saxda ah ee keenaya arrinta waxqabadka.
Koorsada firfircooni waxay eegaysaa counter
Waxa aan u ekaysiiyey arrintan si aan u iftiimiyo in aad isku daydo in aad ka fogaato ku darista aragtiyaha/sharafyada xisaabaadka. Soo saarista xog firfircoon ee xisaabiyeyaashan waxay culaysin kartaa server-kaaga, gaar ahaan marka ay xubno badan ku jiraan khadka. Haddii aad wali rabto inaad isticmaasho, waxaad yarayn kartaa saamayntooda adoo raacaya hagaajinta goobta xubinimada ee lagu taliyay.
Hadda oo aad ogaatay sababta arrinta, waxaad bilaabi kartaa inaad hagaajiso. Oo haddii adiga ama kooxdaadu aanad lahayn khibrad farsamo oo lagu hagaajiyo, markaa waxaad shaqaaleysiin kartaa horumariye WordPress ah si uu kuugu sameeyo. Waxa kale oo aad u sheegi kartaa arrintan waxqabadka horumariyaha plugin oo aad sugto hagaajin iyaga ka.
Behmaster APM waxay ka caawin kartaa milkiilayaasha goobta iyo horumariyeyaasha labadaba inay baaraan oo ay si dhakhso ah u hagaajiyaan arrimaha waxqabadka muhiimka ah.
Ma u baahan tahay xal martigelin oo ku siinaya gees tartan? BehmasterWaxaan kugu daboolay xawaaraha cajiibka ah, amniga ugu casrisan, iyo is-milliminta otomaatiga ah. Eeg qorshayaashayada
Info: Inta badan, hagaajinta arrimaha waxqabadka la xiriira ee uu aqoonsaday Behmaster Qalabka APM wuxuu ka dhacay baaxadda taageeradayada. Haddii aad u baahan tahay caawimo dheeraad ah oo ku saabsan tayaynta boggaaga WordPress, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto mid ka mid ah shuraakadayada.
2. Meesha Xubinimada APM Tusaalaha: Waxqabadka Website-ka caajiska ah Inta lagu jiro wakhti cayiman maalin kasta
Si kasta oo ay u badan yihiin kanaalada suuq-geynta cusub ee yimaada oo taga, iimaylka waa weligiis! Lahaanshaha istaraatijiyad suuq-geyneed xooggan oo iimaylka ah ayaa muhiim u ah in loo beddelo hoggaamiyayaasha macaamiisha iyo macaamiisha wacdiyayaal summaysan. 75% dakhliga ka soo gala suuqgeynta iimaylka waa ololeyaal email oo toos ah. Plugin-ka suuqgeynta iimaylka ee WordPress diirada saaray ayaa si weyn uga caawin kara taas.
Ololayaasha iimaylka ee tooska ah ayaa aad guul u ah (Source: Salesforce)
Tusaalahan, waxaanu ku ogaan doonaa goobta xubinimada oo si xun u qabata wakhti cayiman maalin kasta. Sida ay dhacdo, waqtigan wuxuu ku soo beegmayaa marka boggu si toos ah ugu diro emails dhammaan xubnaha.
Aan dabka shido Behmaster APM muddadan si loo hubiyo arrinta si faahfaahsan. Sidii hore oo kale, waa caqli-gal in la sugo ka hor inta aan la qodin cabirrada waxqabad ee la soo ururiyay Behmaster APM
Behmaster Shaashada ugu weyn APM ee MyBehmaster dashboard
Laga soo bilaabo Guud ahaan wakhtiga wax kala iibsiga shaxda, waxaad arki kartaa inuu jiro sare u kac wakhtiga wax kala iibsiga agagaarka 22: 30. Waxaa ku jira isku dhafka labadaba PHP geeddi-socodka iyo Dibadda codsiyada.
U fiirso korodhka wakhtiga wax kala iibsiga
Marka xigta, aan hoos ugu dhaadhacno Wax kala iibsiga ugu yar shaxda hoose. Halkan, waxaad ka heli doontaa taas / wp-maamul iyo /wp-admin/admin-ajax.php wax kala iibsigu waxay qaadanayaan mudada ugu badan si loo fuliyo. Waxay si maldahan u tahay in codsiyadan cashuur-ururinta ay ka yimaaddeen dashboardka maamulka WordPress. Laakiin weli ma aha caddayn la taaban karo.
Jadwalka wax kala iibsiga ee ugu hooseeya ayaa ku jira Behmaster APM
The / wp-maamul wax kala iibsigu wuxuu qaadanayaa xamaasad 97.74% ee wadarta wakhtiga wax kala iibsiga, oo ay muddada ugu badan tahay Ms 8,188.95. Celcelis ahaan muddada Ms 1,663.61 Midna ma fiicna, gaar ahaan marka aad sidoo kale arki karto in ay socoto ku dhawaad ​​50 jeer daqiiqadii. Aynu si qoto dheer u eegno wax kala iibsiga.
Dooro tusaalooyinka wax kala iibsiga ee macaamilka "/ wp-admin".
ka dooro Muunad ugu gaabis ah ka Tusaalooyinka wax kala iibsiga liiska. Waxaad hadda arki kartaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan, sida URL-keeda saxda ah iyo kan Jadwalka raadraaca wax kala iibsiga.
Faahfaahinta muunada macaamilka oo leh URL sax ah
Jadwalkaaga hoos u samee iyada oo loo marayo jadwalka raadraaca wax kala iibsiga si aad u heshid taabbada ugu gaabis ah. Behmaster APM waxay iftiimin doontaa taakooyinka ugu dhibka badan, marka way kuu fududahay inaad si dhakhso ah u hesho.
The tiro badan_xubin_emailer taako ka dhigaysa Ms 1,269.68 Mudada muunada wax kala iibsiga, taas oo ah 15.5% waxaa ka mid ah.
Behmaster APM waxay iftiiminaysaa taakooyinka gaabis ah
Guji taako si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan. Hoosta Faahfaahinta taako Qaybta, waxaad arki kartaa magaca qoraalka PHP iyo plugin soo saaraya muddadan. Halkan, magaca qoraalka waa tiro badan_xubin_emailer, oo lagu magacaabo plugin isku magac ah.
Hubinta taada gaabis ah
The Raadinta xirmooyinka qaybta waxay sidoo kale siin kartaa fikrado badan oo ku saabsan taako. Si kastaba ha ahaatee, halkan ma aha sidaas muhiim ah.
Anagoo hoos u sii soconayna jadwalka raadinta wax kala iibsiga, waxaan la kulanay taako la yiraahdo Mass_Member_Emailer—>dir_emails, taas oo qaadanaysa xad dhaaf Ms 5,070.85 in la fuliyo. Taasi waxay ka dhigaysaa ku dhawaad 62% Mudada muunada wax kala iibsiga.
Behmaster APM waxay muujisaa dhererka ugu daran ee midabka cas leh
Markaad eegto tafaasiisha muddadan, waxaad heli doontaa caddayn la mid ah tii taako hore.
Faahfaahinta baaxadda xasaasiga ah iyo raad-raacyada
Ka dib markaan eegay labada taako ee ay iftiimiyeen Behmaster APM, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in dambiilaha uu yahay plugin la yiraahdo Xubin Mass Emailer. Markaan eegayo habaynteeda, waxaan ogaaday inay si toos ah iimaylo ugu dirto dhamaan isticmaalayaasha goobta wakhti go'an.
Plugin-ka caadiga ah ee loo isticmaalo in lagu matalo arrintan iyada oo la adeegsanayo xubnaha khayaaliga ah
Maaddaama plugin-kani uu isticmaalayey server-ka martida loo yahay si uu u soo diro emayllada (oo aan ahayn adeeg dibadda ah), waxay hoos u dhigtay goobta qof kasta. Sababtan awgeed, doorashada xalka toosan ee saxda ah ee socodsiinta ololayaasha iimaylka tooska ah ayaa muhiim u ah in lagu ilaaliyo xawaaraha boggaaga xubinimada, xitaa marka uu si degdeg ah u miisaamo.
Goobo badan oo xubin ka ahaanshaha ayaa si liidata u shaqeeya sababtoo ah arrimaha caadiga ah sida kuwa halkan lagu sawiray. Behmaster APM waxay kaa caawinaysaa inaad aqoonsato sababta asaasiga ah ee arrinka waxqabadka, taasoo awood kuu siinaysa inaad xawaaraheeda mareegta xubinimada ku hayso sida ugu fiican, had iyo jeer!
Isticmaalka Behmaster APM si loo ogaado Arrimaha kale ee waxqabadka
Sida tusaalooyinka kor ku xusan, waxaad isticmaali kartaa Behmaster APM si loo baadho ku dhawaad ​​nooc kasta oo arin hawleedka goobta xubinimada WordPress. Haddi ay tahay plugin-boonnada aan la hagaajin ama dashboard-ka xidhiidhsan ee caajiska ah, Behmaster APM waxay la shaqeysaa dhammaan noocyada boggaga WordPress ee lagu martigeliyo Behmaster.
In kasta oo isticmaalka goobta uu yahay arrimo xagga suuqgeynta iyo ganacsiga, farsamo ahaan, dhammaan bogagga WordPress waa isku mid indhaha weligood-fiirsashada Behmaster APM Ka dib oo dhan, waa dhan code. Laga soo bilaabo dukaanka WooCommerce iyo goobta xubinnimada ilaa shabakad Multisite WordPress ah, waad isticmaali kartaa Behmaster APM si loo baadho ku dhawaad ​​nooc kasta oo arin hawleedka goobta WordPress ah.
Goobaha xubinimadu waa hab fiican oo aad ku gadan karto xirfadahaaga iyo waxa ku jira. Si aad u socodsiiso goob xubinimo oo guul leh, waxaad u baahan tahay inaad keento khibrad adeegsi oo wanaagsan xubnahaaga. Taasi waxay suurtogal u tahay oo keliya ilaalinta goobta waxqabadka sare leh.
Kor u qaadida waxqabadka, goobaha xubinimada waxay soo bandhigaan caqabado gaar ah, sida hagaajinta arrimaha waxqabadka ee dukaanka WooCommerce. Maqaalkan, waxaad ku baratay siyaabo kala duwan oo loo isticmaalo Behmaster APM si aad ugu saraysato xawaaraha iyo waxqabadka shabakadaada xubinimada.
WordPress waa hab degdeg ah oo sahlan oo lagu bilaabo boggaga xubinnimada. Si kastaba ha ahaatee, boggaga xubinimada WordPress waxay ku jiraan fasal gaar ah marka ay timaado wax ka qabashada tayaynta waxqabadka. Ugu dambayntii, waa wax walba oo ku saabsan dhisidda bulsho dad isku fikir ah. Isticmaal Behmaster APM oo ah lammaanahaaga waxtarka leh ee safarkan midhaha badan leh.
Miyaad la kulantay xawaaraha bogga xubinnimada iyo arrimaha waxqabadka? Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno fikradahaaga iyo halgankaaga. Fadlan hoos noogu dhaaf faallo.
Sida Loola jaanqaado Qiimaha Alaabta WooCommerce iyo Qiimaha Kaydka
Aragtida 2021 ee wakaaladaha suuqgeynta dhijitaalka ah: mustaqbalku waa dhalaalaya